Budata FAST Speed Test APK maka Android
Budata FAST Speed Test
Free Budata maka Android (0.29 MB)
Budata FAST Speed Test,
FAST Speed ​​​​Test bụ ngwa nnwale ịntanetị nke Netflix mepụtara ma na-akwado nha ọsọ njikọ ekwentị na WiFi (ikuku).
Nnwale ọsọ ọsọ Netflix bụ ngwa dị mfe ị nwere ike ibudata na ekwentị gam akporo gị, mbadamba ihe nefu (na-enweghị mgbasa ozi) wee tụọ ọsọ nbudata. Ngwa nnwale ọsọ ịntanetị, nke nwere ike ịrụ ọrụ na ekwentị mkpanaaka, webụ na ọbụna smart telivishọn, na-enye interface dị mfe ma na-atụle ọsọ nbudata gị ozugbo. Nikwu ya nụzọ ọzọ, ọ naghị enye ozi zuru ezu dị ka nbudata ọsọ, uru ping, atụnyere nsonaazụ dị ka Speedtest.
Speedtest.net bụ otu nime saịtị Türk Telekom (TTNet), Turkcell Superonline na ndị debanyere aha Vodafone na-aga maka nyocha ọsọ ọsọ ịntanetị. Speedtest, ngwa nyocha ngwa ngwa...
Nnwale ọsọ ọsọ ọsọ, nke na-enye nhọrọ iji tụnyere nsonaazụ ya na Speedtest na njedebe nke ule ọsọ, na-eji sava Netflix tụọ ọsọ ịntanetị gị. Achọrọ m igosi nke a; Maka na ị nwekwara ohere ịhọrọ nkesa dị iche wee lelee ọsọ ịntanetị gị ọzọ na Speedtest.
FAST Speed Test Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.29 MB
Mmepụta: Netflix, Inc.